Semalt Expert: "Bank Of America Alert-Account Yakasimudzirwa" Ndiyo Inonzi Phishing Email
Munguva pfupi yapfuura, nyanzvi dzakawana hutsva hutsva hwevanokanganisa phishing hunoshandisa kunyengedza vatengi. Vanoshandisa bhizinesi reBhange reAmerica kuzivisa vashandisi kuti mumwe munhu akashandisa kuvharwa kwemajeri kuti ave nekuwana maakaiti avo. Vanobva vagadzira nhoroondo inotsvaga kubva kune izvi, zvichiratidza kuti basa racho rinofanira kukonzera kusimiswa kwemabhuku avo kana vakasarudza kusatora matanho. Zviri pachena kuti pane chinokonzera mhirizhonga sezvo idzi dziri maitiro eupfishing anotengesa vashandisi kune webhusaiti inoedza kubata ruzivo rwavo.
Michael Brown, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutungamiri, anotaura kuti munguva yakapfuura, vatengesi vakashandisa nzira imwechete kakawanda. Inoratidzika kunge iri mutemo weupfiti unosanganisira rimwe bhangi - programas para chatear gratis en facebook. Chikonzero nei vanoshandisa nzira idzi zvakakwana ndeyekuti vanoratidza zvikwereti, uye mumatambudziko akawanda, kuti vabatsirwe. Nezvinyorwa zvakakodzera, pamwe chete nemapepisiti akakodzera, phishing hackers vanogona kuchenesa bhangi yemunhu.
Imeiri yavanoshandisa inofanana neyebhangi inotumira. Zvisinei, nokuda kwevasingazivi, zvinogona kuvanyengedza kuti vatende kuti zvechokwadi imeri kubva kuBan America. Mukati me email, inhoroondo yakajeka yekuti sei kero ye IP isina kukodzera kuedza kupinda muakaunti zvisiri pamutemo..Iko zvino inoratidza kuti bhagheni ichaita kuti shandise iyo account sekuchengetedzwa kwekuchengetedza. Kuti mushandise awane ruzivo rwekubhadhara, pane URL yakabatanidzwa, iyo inobvunza user kuti ave nechokwadi chemashoko omushandi. Uyezve, email inopera mushure maawa makumi maviri nemana .
Inotaridzika yakatendeka, chaiko?
Phishing ndeyemutemo usingabvumirwi nemutemo, inoitwa ne-cyber crooks vanoedza kuzvivanza ivo sevimbovimbwa. Kubva pamuenzaniso wakaratidzwa pamusoro apa, chikwama che cyber chakaita kuti chiite sekuti chaiva Bhizinesi reAmerica. Vanoti ndivo nhengo yeboka rebasa rinoshanda nebhangi kuti vabatsire mubati webhuku. Phishing emails ane unhu hunozivikanwa huri kuti une chibatanidziro kana chibatanidzi chakabatanidzwa icho chinokurudzira vashanduri kuti vape kana kubha.
Chibvumirano chinowanikwa mumamerican redirects kune webhusaiti yakaipa iyo inoedza kupedzisa data kubva kune vashanyi. Zvisinei, mashoko akanaka kune vashandisi ndeyokuti nzvimbo yacho ichangobva kutorwa. Kubva pane izvo vanhu vanoziva nezvemasayenzi ekunyengera, zvichida kubva kune nyanzvi kana mazviitiko, pane chiitiko chikuru apo nzvimbo yacho yaive iripo, yakakumbira vashandisi kugovana neBhange Details zvakadai seBhangi yeAmerica nekutumira pasi. Vanogona kunge vaenda mberi kundokumbira mamwe mashoko evanhu pachavo kana nyaya yewebhu inoda kuti vaite.
Kutengesa uye emafishing e-phishing emafomu e-bombard internet uye nhoroondo yemabhiriyoni emashoko anotumirwa kuvashandisi vepa internet pazuva. Kunyangwe apo pane kuparara kunorondedzerwa nhamba ye spam emails yakatumirwa pasi rose, vashandisi vanoda kuziva kuti vanoona sei uye vanozvidzivirira pachavo. Mutemo wegoridhe pano unogara uchiyeuka kuti urege kupa chero ruzivo rwomunhu kubva kuvanhu vanoshanda kuburikidza nemasitirwo anotarisa. Zvadaro, kana mumwe akagamuchira e-mail yakafanana neyo yakatsanangurwa pamusoro apa inofunga kuti inouya kubva kuBan of America, zvinotarisirwa kuti ivo vasaisa pairi.